အင်တာဗျူး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 21
အင်တာဗျူး ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ Prominent leaders and stalwarts of the NLD, U Win Htein and U Win TinCopyright:Copyright © James Mackay / enigmaimages.netNLD အမတ် အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီးဦးဝင်းထိန်၏ လွှတ်တော်တက်ရေး မတက်ရေး သဘောထားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာအမြင် No tags for this post. Related posts No related posts.
အိုးဝေ ဆင်ဆာတင်မည် မဟုတ် အင်တာဗျူးဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်း၊ ဗကသ စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို No tags for this post. Related posts No related posts.
Messenger News Journal ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ကနဦး ထွက်ပေါ်လာသော ဆူနာမီသတိပေး မြေပုံတခုတွင် မြန်မာပြည်လည်း စက်ကွင်းမလွတ်ကြောင်း တွေ့ရသည် “—ည ၇ နာရီကျော်မှ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားရှိတယ်—“ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အောက်ရေလှန်ခြင်း (back-wash) များ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး တာဝန်ယူထားရတဲ့ အထက်မြန်မာပြည်က တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေအတွက် မန္တလေးမြိ်ု့တော်ကို ခရီးသွားရောက်နေတဲ့အတွက် ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားမပြောဖြစ်ခဲ့တာ တလနီးပါး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီမို့ ဆရာနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အခါမှာ မေးခွန်းများ ပြန်လည် မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ မေး။ ။ အခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတော့ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ အောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ ခရီးထွက်ပြီး အပြန်မှာ ဆရာ့ဘက်က ဘယ်လိုမျိုး တွေ့ကြုံရတယ်လို့ ပြောချင်သလဲ။ ဖြေ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တိုတိုပြောရရင် တရားမျှတမှုရှိလို့ နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ မတရားမှုတွေ အများအပြားရှိတယ်။ မတရားမှုတွေ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ အမတ်လောင်းများနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့တာကတော့ လာမည့် ဧပြီ ၁၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်န်အယ်ဒီက အမတ် ၄၈ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်။ အဲသည်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့ အဲသည် ၄၈ နေရာအတွက် ဒေါ်စုက စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့ဆီမှာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် သောင်းသောင်းဖျဖျ တခဲနက် ကြိုဆိုကြတယ်။ အဲသည်မှာ ပြည်သူလူထုက သူတို့နယ်မြေများကို ကိုယ်စားပြုမယ့် အင်န်အယ်ဒီအမတ်လောင်းများနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မည်သို့ မျှော်လင့်ထားကြသလဲ။ ဘယ်လိုမျိူး ဆက်လက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလဲဆိုတာကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာက ပြန်လည် ဖြေကြားရာမှာ … ကျနော်...
သူများတွေအတွက် ဦးဝင်းတင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ။ မိုးမခ၊ မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်မှာ စတင်ပြီးတော့ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ အထိ ၁၉ နှစ်လုံးလုံး စစ်အစုိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခြင်းကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာဆရာ၊ ဒီမိုကရေစီရေး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၊ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ သံမဏိသက်ရှည် အရေးတော်ပုံတပ်သား ဦးဝင်းတင် ဒီမတ်လ ၁၂ ရက်မှာ ၈၂ နှစ်ပြည့်မှာ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ လွတ်မြောက်ချိန်က စတင်ပြီးတော့ မရပ်မနား၊ မဆုတ်မနစ်နဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဆက်လက်ပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဆရာဦးဝင်းတင်ဟာ ယခုအချိန်မှာလည်း သူရဲ့ မိခင်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံအဖြစ် စိုက်လိုက်မတ်တပ်ဖြင့် တက်ကြွစွာ...
DVB အင်တာဗျူး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ဦးအေးချမ်းနိုင်နှင့် ဦးကျော်ဆန်း တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဒီဗွီဘီ) No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ by Yangon Press International on Saturday, 25 February 2012 at 08:25 · မြစ်ကြီးနား၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ (YPI) (ဆိုင်းဆွတ်) ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၈နာရီ မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်း မဂျွယ်ခန်းမမှာ ကချင်ပြည်နယ်သို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်သား ခေါင်းဆောင်းများ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနဲ့ ညစာအတူစားခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုစဉ်က ကချင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ နာယက ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပြောဆိုကြတဲ့အကြောင်းကို YPI သတင်းထောက်က ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာကို မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ။ ။ ည...
“ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်” လှည်းတန်းဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သူ မခင်မြတ်နွယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း by Yangon Press International on Friday, 24 February 2012 at 07:16 · ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (YPI) (ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က လှည်းတန်းလမ်းဆုံ အများသုံး သန့်စင်ခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယင်းသန့်စင်ခန်း ၀န်ထမ်း တဦးသေဆုံးပြီး တဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ မခင်မြတ်နွယ်မှာ ဆေးရုံတွင်လနှင့်ချီ ကုသမှုခံယူလျှက်ရှိသည်။ သူ့အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အတွက်မည်သူ့ကိုမျှ အာဃာတမထားပဲ သူ့၏ မျက်နှာတခြမ်း မှ ဒဏ်ရာကိုသာ ပြန်လည်ကောင်းစေချင်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။ မခင်မြတ်နွယ်နှင့် YPI တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်ကို...
ကိုဇာဂနာနဲ့ မေးခွန်းများ – အမေရိကားကို ဘာတွေ သယ်လာသလဲ မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ စစ်အစုိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ဖိနှိပ် ဖမ်းဆီး ပိတ်ဆို့မှုတွေကြားက ပြည်သူတွေကို အနုပညာတင်ဆက်သူ၊ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေပြုလုပ်သူ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဇာဂနာတယောက် နောက်ဆုံးတခေါက်အဖြစ် အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိ ခြေဆန့်ပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပြပွဲက မှတ်တမ်းဇာတ်ကားတိုများ ပြသခြင်းတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ကို ဖေဖော်ဝါရီလထဲ ရောက်နေခိုက် ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မေရီလန်း၊ နယူးယောက်မြို့တော်များမှာသာမက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော်မှာလည်း မြန်မာမိသားစုများနဲ့ ရုပ်ရှင်ပြပွဲနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတော်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ယမန်နေ့က ကိုဇာဂနာရဲ့ ဇနီးနဲ့ သားသမီးများ ရှိရာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တော်ကုို ရောက်ရှိလည်ပတ်ခိုက် မိုးမခက တယ်လီဖုံးဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းမိသမျှကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။...
မလေးမူးယစ်အမှု ထိပ်တန်း သံသယတရားခံဟာ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်လို့လည်း စွပ်စွဲခံနေရ https://t.co/3aSHBh7MyX https://t.co/m1DkyhM81Q about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
စမ်းစမ်းတင် – တွံတေး၊ ဆူးအက်နဲ့ ကရာတူးမြောင်း တွေက ပေးတဲ့အတွေး https://t.co/dBnuR0prEC https://t.co/3sEpvg6dnc about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် လူငယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲ ဇွန်၂၄ https://t.co/cuI3AIqEap https://t.co/qtTi71gf3S about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
လင်းသက်ငြိမ် ● ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းစကား https://t.co/vggaxW3Fhr https://t.co/sJxYEJfjdm 07:39:50 PM June 21, 2018 ReplyRetweetFavorite